တရားဥပဒေ 4400 views
နိုင်ငံတော်သမ္မတ သို့မဟုတ် လွန်း
အထည်များအား ရက်လုပ်ကြရာတွင် ရက်ကန်းစင်၌ ရက်လုပ်ကြပြီး ထိုအထည်ပြီးမြောက်ရန်အတွက် အဓိကကျသည်မှာ လွန်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ လွန်း၏ အဓိကကျရမှုမှာလည်း ရက်ကန်းစင်၌လွန်းမှာ တစ်ဖက်မှတစ်ဖက်သို့ မနေမနားသွားရပါသည်။ ထိုသို့ မနေမနားသွားမှပင် အထည်မှာ ပြီးပြည့်စုံသည့်အနေအထား ရောက်ရှိသွားသကဲ့သို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတဟူသည်မှာလည်း မနေမနား တိုင်းပြည်၏တာဝန်ကို ရွက်ဆောင်ရပါသည်။ ထိုသို့ရွက်ဆောင်မှသာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပြည့်စုံပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမှာလည်း တည်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ အခန်း (၁)၊ ပုဒ်မ-၁၆ အရ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲနှင့် နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေး အကြီးအကဲသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်သည်ဟူ၍ ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး အလားတူ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ အခန်း (၃)၊ ပုဒ်မ-၅၈ ၌ “နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် နိုင်ငံသားအားလုံး၏ အထွတ်အထိပ်နေရာရရှိသည်” ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အခန်း (၅)၊ ပုဒ်မ-၁၉၉(က)တွင် “နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးအကြီးအကဲသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဖြစ်သည်” ဟူ၍ ပြဋ္ဌာန်းထားချက်အရ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် နိုင်ငံတော်အတွက် အလွန်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ စီမံဆောင်ရွက်အုပ်ချုပ်နေရသူဖြစ်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ တိုက်ရိုက်အာဏာရရှိသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အစ နိုင်ငံ၏ အလွန်အရေးပါသော ဝန်ထမ်းများအား ခန့်အပ်ရာ၌ နိုင်ငံတော်သမ္မတကသာ ခန့်အပ်နိုင်သကဲ့သို့ ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးအပါအဝင် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး၌လည်း သမ္မတကပင် ရှေ့ကဦးဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ သမ္မတတစ်ဦး၏ တာဝန်နှင့်အာဏာမှာ မည်မျှကြီးမားကြောင်း ပေါ်လွင်လျက်ရှိပါသည်။
ထိုအချက်နှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ သမ္မတတစ်ဦးအနေနှင့် မည်သို့သောအခြေအနေရှိကြောင်း အောက်ပါစာတမ်းမှ သမ္မတတစ်ဦး၏ အနေအထားကိုလည်း မီးမောင်းထိုးပြခဲ့ပါသည်။
“The president of the United State is both more and less thanaking, he is also both more and less thanaprime minister.” ဟူ၍ ရေးသားထားသည်ကို ဖတ်ခဲ့ရဖူးပါသည်။
အထက်ပါဖော်ပြချက်အရပင်လျှင် သမ္မတ၏အာဏာမှာ မည်မျှလောက်ရှိကြောင်းကို အတိုင်းအတာအား ဖော်ပြရန်မှာ မလွယ်ကူပါ။ သို့သော်လည်း သမ္မတတစ်ယောက်အနေနှင့် အာဏာရှင်ဖြစ်ရန်မှာမူ အလွန်လွယ်ကူလှပါသည်။ သမိုင်းကြောင်းအရလည်း သက်သေရှိပြီးဖြစ်သည့်အပြင် ယနေ့ တရုတ်ပြည်သူ့
သမ္မတနိုင်ငံရှိ သမ္မတရှီကျင့်ဖျင်နှင့် ရုရှားသမ္မတ ပူတင်တို့သည် အထင်အရှား သက်သေပြဆဲပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဤနေရာတွင် သမ္မတ၏ နိုင်ငံအာဏာနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို နိုင်ငံတော်နှင့်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်လည်းကောင်း၊ အခြားသော ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့်လည်းကောင်း ဆန်းစစ်လေ့လာပါက သမ္မတ၏ ညာလက်ရုံးမှာ ရှေ့နေချုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ရှေ့နေချုပ်အား သမ္မတကပင် ခန့်အပ်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မူအရ နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များဖြစ်သော လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာအမိန့်များ ထုတ်ပြန်နိုင်သည်မှာ သမ္မတဖြစ်ပါသည်။ အလားတူ နိုင်ငံတော်အား ဆန့်ကျင်နှောင့်ယှက်သူများ၊ ကျူးကျော်သူများအား ဥပဒေအရ အရေးယူနိုင်ရန်မှာ ရှေ့နေချုပ်၏ အကြံဉာဏ်ကိုရယူ၍ တရားရုံးတွင် တရားစွဲ ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိပါသည်။
သမ္မတတစ်ဦးအနေနှင့် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍လည်း အချို့သောအာဏာများ ရရှိမှုရှိပြန်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် မပါဝင်သော်လည်း သမ္မတမှာ တရား စီရင်ရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များအား ခေါ်ယူ၍ ရှင်းလင်းခိုင်းသည်လည်း ရှိပါသည်။ အမေရိကန်သမ္မတတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သူ Theodore Roosvelt က အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြားခဲ့ဖူးပါသည်။
The president's right, to do anything that the needs of the nation demand unless such action is forbidden by the constitution or the Laws ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတတစ်ဦးအနေနှင့် နိုင်ငံအတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်ပါက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်ဖြစ်စေ၊ ဥပဒေတွင်ဖြစ်စေ ပိတ်ပင်ထားခြင်းမှအပ ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် သမ္မတတစ်ရပ်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ မူ ၇ ချက်ရှိရာ ၎င်းမူများတွင်ဖော်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။-
(1) to serve as the nation's chief executive and to secureafaithful enforcement of the law
(2) to make appointments and removals
(3) to exercise the prerogative of pardon
(4) to conduct diplomatic relations and negotiate treaties
(5) to send messages to Congress, issue executive orders when empowered by law to do so, and either sign or veto acts of Congress
(6) to be commander in chief of the army and navy
(7) to exercise the wide range of influence which accures to him as the titular leader of his party. These powers are of such extensive scope as to warrant their careful consideration, one by one. ဟူ၍ဖြစ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါ အမေရိကန်သမ္မတ၏ လုပ်ဆောင်ချက် ၇ ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ သမ္မတ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်မှာလည်း အတူတူနီးပါးပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ အခွင့်အာဏာများကိုမူ ဒီမိုကရေစီစနစ်နှင့် ဝေးကွာခဲ့သော ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့ သမ္မတတစ်ဦးအနေနှင့် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ခက်ခဲမည်မှာမှန်သော်လည်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးအနေနှင့် ထိုအခက်အခဲများကို ကျော်လွှားနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းရမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
ဒီမိုကရေစီစနစ်၏ အသီးအပွင့်များ ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ရေမှာ မဖြစ်မနေလိုအပ်ပြီး ထိုရေအားထိန်းသိမ်းရာတွင် ထားရှိရမည့် ရေလှောင်ကန်မှာလည်း ကောင်းမွန်သည့် ခိုင်ခံ့သည့် ရေလှောင်ကန်ဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက ရေထိန်းသိမ်းသည့် ရေလှောင်ကန်မှာ ကောင်းမွန်မှု မရှိပါက ရေအားမထိန်းသိမ်းနိုင်သကဲ့သို့ ဒီမိုကရေစီအသီးအပွင့်များသည်လည်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
သမ္မတတစ်ဦးအနေနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအားဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်နင်းစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အုပ်စုအဖွဲ့များအား လိုအပ်သလို ဖွဲ့စည်းပြီး ထိုအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို မျက်ခြည်မပြတ် ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သကဲ့သို့ နိုင်ငံ၏အရေးအရာများကို ဆောင်ရွက်နေသူများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အလိုက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိစေနိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အရည်အချင်းမပြည့်မီသူများကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ထုတ်ဖော်ဖယ်ရှားရန် အမှန်တကယ်လိုအပ်ပါသည်။
ဤနိုင်ငံအနေဖြင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဒီမိုကရေစီနှင့် အလှမ်းဝေးကွာခဲ့သည့် အားလျော်စွာ နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားတို့၏ စိတ်ဓာတ်၊ စည်းကမ်း၊ ပညာတိုးတက်ရေးအတွက် မဖြစ်မနေဖော်ဆောင်ပေးရန်မှာလည်း လိုအပ်လှပါသည်။
ဤနေရာတွင် စာရေးသူအနေဖြင့် A Study by The Inns of Court Conservation and Unionist Society အဖွဲ့မှ ရေးသားသည့် Rule Of Law စာအုပ်၊ စာမျက်နှာ ၁၀ တွင် အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားထားခဲ့ပါသည်။
“The instruments of executive power the Army and the Police were brought within the control of Parliament, and made subject, in general, to the ordinary law of the land.” ဟူသော စာသား၏ အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်း ဖော်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း သမ္မတတစ်ဦး၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်မှာ လွန်စွာကျယ်ပြန့်လှသည်သာဖြစ်ရာ အထက်တွင်ဖော်ပြသကဲ့သို့ ပြီးပြည့်စုံသည့် အထည်ချုပ်လုပ်မှုမှာ လွန်းပျံသည်သာ အဓိကကျသကဲ့သို့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့မှာ သမ္မတ တစ်ဦး၏ မနေမနားလုပ်ဆောင်မှုအပေါ်တွင် မူတည်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ တိုက်ရိုက်အချိုးကျနေတဲ့ တရားစီရင်ရေး
တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍသည် ပြည်သူများကြား စံပြဖြစ်အောင် စစ်ဆေးသင့်ဟု သမ္မတပြောကြား